Link Detox: Raadi Backlinks oo dila SEO | Martech Zone
Link Detox: Raadi Backlinks oo dila SEO-gaaga
Talaado, Maarso 5, 2013 Douglas Karr
Backlinking wuxuu sii ahaanayaa cayaar aad iyo aad u khatar badan. Muxuu mar ahaa habka ugu fudud ee lagu dhisi karo darajadaada khadka tooska ah ayaa hadda ka dhigi kara goobtaada inay aasan tahay Hadda waxay noqotay lagama maarmaan inaad adiga kala bixi xiriiriyeyaasha kuwaas oo dilaya darajada raadintaada - gal Iskuxirka Xiriirka, qayb ka mid ah qoyska wax soo saarka ku jira LinkResearchTools.
Link Detox waa aalad kaligeed istaagta oo uqeybisa backlinks-yada domainka 3 nooc (sun ah, shaki leh, ama caafimaad qaba) waxayna kugu taageereysaa nadiifinta astaanta xiriiriyahaaga. Isku xirnaanta 'Link Detox' waa fududahay in la maareeyo, waxaad ku ogaan kartaa dhammaan xiriidhada xun ee boggaaga adigoo gujinaya hal guji. Link Detox wuxuu falanqeynayaa astaantaada isku xirka iyada oo ku saleysan noocyo kala duwan oo ah cabbiraadaha SEO iyo xaalado dhibaato leh oo la yaqaan. Kadib waxay bixiyaan talooyin ku saabsan xiriiriyeyaasha sunta ah.
Waxaad awoodi kartaa iska qor Link Detox oo fuliya 1 detox bishiiba $ 40.
Tags: dib u xiridbacklinksbacklinks xunxiriiro xunisku xidhka detoxlinkresearchtools